Korea: 518, Fandripahana tao Gwangju · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2018 4:50 GMT
518 ny tarehimarika. Tarehimarika tsy adinon'ny Koreana. Feno ‘518’ nandritra ny andro maromaro ny bilaogy ho fahatsiarovana ny Fandripahana tao Gwangju (Hetsika Demaokratizasiona tao Gwangju) tamin'ny 18 May 1980. Nisy bilaogera iray antsoina hoe thirdtype namoaka lahatsarinkira maharitra dimy minitra sy ny tantaran'ny maty.
Nampiseho afisin-tsarimihetsika mahavalalanina ny bilaogera tahaka ny qts, ‘Naniry aho ho nofinofy,’ miaraka amin'ny teniny fohy momba ny 518.
Bilaogera iray, Level-B, niresaka momba ny nahafantarany ny fandripahana tao Gwangju.
Namoaka lahatsary fanadihadiana i Ulariul, bilaogera iray, ary nanazava ny fomba nampiovany fijery tamin'izany.
Tena malahelo tokoa aho… Mbola velona i Chun Doo-hwan.
Mahatsiaro izany amin'ny fombany ny andian-taranaka tanora, tahaka an'i Canimg.
Nanao andian-tantara an-tsary tao amin'ny aterineto ny tanora iray malaza amin'ny tantara an-tsary an'aterineto mampiseho ny tantaran'ny hirifirin'ny andian-taranaka tanora avy amin'ity toe-javatra ity te-hamaly faty an'ilay mpitarika fototra, dia i Chun Doo-hwan, ary dia nahare momba azy ity ireo tanora mbola tsy nahalala izany.